Taariikhda My Butros » Ma dooneysaa inaad la haasawdo dumar Your Dream? Wax ka baro Ants
Last updated: Oct. 24 2020 | 2 min akhri
Imisa jeer ayaa waxay u dhaceen si aad u? Saaxiibkaa oo aad ku taagan tahay ee baar iyo aad aragto qof dumar ah oo soo jiidasho. Waxaad wici Hawsh ka dibna ku guuldareystaan ​​in ay la yimaadaan line a. Waxaad dareemi kartaa in gabadha uu doonayo in uu maqlo line laakiin markaas, sidoo, aad carrabka ku xidhan. Halkii ay awoodaan in ay dabaqa naagtii waxay aad aakhirka is xoogaysanayaa by saaxiibkaa, "Cat helay carrabkaaga?"
Nin kastaaba wuxuu lahaa qaybtooda ka sareso ee dugsiga. In noloshaada sidoo kale waxaa jiray gabar in aad rabto in aad samaysid wax badan la - ka soo qaato iyada, si uu shineemada u, gacmaha is qabsadaan oo guud ahaan waxay leeyihiin waqti aad u weyn. Laakiin marna ma soo duuboo kartaa ilaa geesinimada - sidoo kale waxaad u malaysay aad u wanaagsan oo ku filan ma tahay ama aad had iyo jeer arki doono qof dumar riyo aad ee hubka ee dugsiga Adonis. Oo waxaad aamusnaan bixiyey, fekerayo kaliya iyada oo taahaa ku saabsan.
Gebi beddelo mawduuca - Sidee baad u ogaato oo ku saabsan quraanjada? Waxaad dhab ahaan aan siiyey cayayaan yar yar fikirka kasta, aad qabto? Waxa ugu horreeya ee soo baxa in ay maskaxdaada marka aad aragto gumeysi ah ku nooli waa in ay iyaga booqday.
Laakiin miyaad taqaan in ku nooli ay sidoo kale naga dhigaan casharro nolosha muhiim u ah dabaqa naag? Aan aragno sida.
Act #1 - Ha sugin wax u dhacdo
Ants joogto ah ku dhaqaaqo; ay had iyo jeer wax. Inta badan ragga iyo dumarka jacaylkiisa qaadan la'aan. Sidaas darteed haddii aad ku sii sugayo dumar riyo aad idiin timid iyo soo jeedin jacaylka, markaas idin illoobi kartaa dumarka ugu aad jeceshahay. Haddii aad rabto in aad qof dumar dabaqa si fudud u socdaan ilaa iyada oo sheegaya in aad dooneyso iyada. In ugu xumi timaaddo odhan doonaa lahayn.
Act #2 - Ha quusan
Ants ma joojin - ay garanayaan ay u socoto iyo yimaaddaana uu ku maragfuro xilli Guuldarrooyin iyo mashquusho. Waxaad lahaa aad diidmada koowaad? Ha welwelin; ma ahan dhamaadka nolosha. Isku day mar kale ... fakar geesiyaal movie kuwa ugu dambeyntii u suurtagashay in ay soo jiito dumarka ay xitaa marka ay diiday mar kale iyo mar kale.
Act #3 - In diiradda
Ants leeyihiin gool oo gaar ah diiradda - ay u ogaadaan haddii ay waxba badbaadin karin, waayo, wakhtiyada adag ay ku xidhnaan inay u dhintaan. Haddii aad rabto qof dumar ah oo aad rabtid inuu dabaqa sii dib gaadhsiiya iyada. Just loo hubiyo in aad bedesho khadadka iyo qaabka aad.
Act #4 - Badbaadi khadadka aad
Ants cuno qaar ka mid ah ay cunto oo ay qaar ku badbaadiyo. Ilaa hadda sida haweeneydaasi waa ay ka walwalsan tahay in aanad faaruqiso ammos oo dhan hal mar. Noqo funny; noqdo hal-abuur iyo inay yihiin asal iyo ugu dambeyntii ayay idinkaa Adkaane.
Ma dareensan tahay in mar dambe ku nooli ay uga hoosaysaa, aad tahay? Haa, ay noo dhigaan casharro badan oo muhiim ah oo nolosha, oo ay ku jiraan mid ka mid ah kuwa ugu heer hoose ah in aan awoodo in uu soo jiito qof dumar ah oo ay iyada raadsado-. Haddii aad qabto naagtan aad rabto in aad si fudud u dhaqmaan sida dabaqa qudhaanjada halkan. Markaas waxaa u timid dib oo ii sheeg haddii aad weli taahaan, sida naag riyo aad waxaa la iska qaadin by Adonis kale.